काठमाडौं । एनसेलले आप्mना प्रिपेड ग्राहकका लागि ‘इन्डलेस कुराकानीप्लस’ अफर ल्याएको छ । यसबाट ग्राहकले एनसेल नेटवर्कभित्र अझै सुलभ दरमा धेरै कुराकानी गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ । आप्mनो नयाँ थिम ‘प्लस’अन्तर्गत एनसेलले प्रिपेड ग्राहकलाई आकर्षक भ्वाइस अफर ‘इन्डलेस कुराकानीप्लस’ल्याएको हो ।
अफरअन्तर्गत ग्राहकले ७ दिन, १५ दिन वा ३० दिनको समयावधि रहेको भ्याइस प्याक आप्mनो आवश्यकता अनुसार सुचारु गर्न सक्ने छन् । ७ दिन समयसीमा रहेको ७०० मिनेट अन नेट टक टाइम सुविधाका लागि करसहित करीब रू. ९६ लाग्ने छ । त्यस्तै १५ दिनको प्याकमा करसहित रू. १९१ मा १ हजार ८७५ मिनेट अन नेट टक टाइमको सेवा पाउने छन् र १५ दिनसम्म प्रत्येक दिन १२५ मिनेटको टक टाइमबाट फाइदा लिन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
अलि धेरै भ्वाइस सेवाको आवश्यकता रहेका ग्राहकका लागि ३० दिनको आकर्षक भ्वाइस प्याक उपलब्ध छ । करसहित रू. ३८१ तिर्दा ४ हजार ५०० मिनेट अन नेट टक टाइम लिन सकिने छ । यसमा ग्राहकले हरेक दिन १५० मिनेट टक टाइम ३० दिनसम्म प्राप्त गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
एस्ट्रिक्स १७११८ एस्ट्रिक्स ७ ह्यास डायल गरी निर्देशनअनुसार प्याक सुचारु गर्न सकिने छ ।
Category: Technology by palpalkokhabar